Miaiky Ny Google, Yahoo Ary Ny Microsoft Fa Ilaina Ny Fitsipi-pitondrantena Mikasika Ny Fahalalahana Maneho Hevitra Amin’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Miaiky Ny Google, Yahoo Ary Ny Microsoft Fa Ilaina Ny Fitsipi-pitondrantena Mikasika Ny Fahalalahana Maneho Hevitra Amin'ny Aterineto
Voadika ny 05 Jona 2018 1:58 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, বাংলা, عربي, srpski, Español, 繁體中文, 简体中文, Italiano, Français, English
Natomboka ny tetikasa Global Initiative Network. Fisantarana natao hananganana ny fitsipi-pitondrantena ho an'ireo fikambanana iraisam-pirenena amin'ny tontolon'ny aterineto handinihana ny fiarovana ny fiainana manokana an'ireo mpampiasa aterineto sy ny fahalalahana maneho hevitra. Ny fivondronan’ireo fikambanana mpiaro zon'olombelona, ireo fikambanana mpanohana ireo media, ireo laboratoara fikarohana, ary ireo sehatra ngeza toy ny Yahoo, Google ary ny Microsoft no nanomboka io fisantarana io. Ny tanjony: hiantohana fa ireo mpandraharaha amin'ireo teknolojia vaovao mikasika ny fampahalalam-baovao dia manaiky ny “fandraisana andraikitr'izy ireo hanaja sy hiaro ny fahalalahana maneho hevitra ary ny zon'ireo mpampiasa azy hanana ny fiainany manokana “.
Teraka tamina fanehoankevitra amin'ny fandraisana anjaran'ireo mpandraharaha ireo amin'ny sivana ety anaty tambajotra ity fisantarana ity, indrindra tao Shina. Roa taona no nilaina mba hampandehanana azy tsara sy hamaritana ireo fombafomba azo ekena, na izany ho an'ireo vondrona mpiaro zon'olombelona, na ho an'ireo orinasa.
Nandray anjara tamin'ilay vondrona mpanao dinikasa i Rebecca MacKinnon, mpiara-nanorina ny Global Voices ary manoratra eo amin'ny blaoginy RConversation hoe:
Nisy olona nantso sady nanontany raha toa ka “matotra io zavatra io” na hoe sao dia mba ravindravina atentina fotsiny io mba hanelingelenan'ny Kaongresy [amerikana] an'ireo kaompania ireo”? Ireo fikambanana manana ny hajany toy ny Human Rights Watch, Human Rights in China, Human Rights First, ary koa ny Kaomity ho an'ny fiarovana ireo mpanao gazety, dia tsy hanaraka an'io zotra io raha toa tombanan-dry zareo ho tsy misy ilàna azy ilay izy.
Izany hoe, tsy maintsy porofoin'ity hetsika ity fa ilaina izy mandritra ireo taona roa ho avy, amin'ny alalan'ny famolavolàna zotra iray maharesy lahatra, izay mametraka fepetra henjana amin'ny fidiran'ireo orinasa sy ireo fanambaràn'izy ireo hanatanteraka fanombanana hentitra ary hanao fanarahamaso.
Nanoratra teo amin'ny blaoginy, PolicyBeta [amin'ny fiteny anglisy], ny iray tamin'ireo mpikarakara ny hetsika, Leslie Harris, avy amin'ny ivontoerana ho an'ny Demokrasia & teknolojia:
Tsy mitaky fotsiny fikasàna ilay hetsika, fa koa ireo fandraisana andraikitra mivaingana avy amin'ireo orinasa izay mandray anjara mba hirotsaka anaty zotra-na fanentanana anatiny sy ny fanombanana an'ireo zavatra mety hitranga hatrany amin'ny farany ambony, tsy misahana fotsiny an'ireo fangatahana [torohay] izay alefan'ny governamanta amin'izy ireo, fa koa mba hanome mangarahara bebe kokoa ho an'ireo mpampiasa azy momba izay ifandraisan'ireny fangatahan'ny governemanta ireny amin'ny fiarovana ny fahalalahana maneho hevitra sy fiarovana ny fiainan'izy ireo manokana, ao anatin'ireo tsena rehetra misy azy. Tsy maintsy voamarin'ireo mpanao fanamarinana tsy miankina sy azo antoka ny fanajàna an'ireo adidy ireo.
Mampiseho famintinana iray an'ireo adihevitra, ireo fitanisàna nataon'ireo mpandray anjara, ary koa ny ahafahana mifandray amin'izy ireo, ny blaogy miady manohitra ny sivana GFW, amin'ny fiteny anglisy sy amin'ny fiteny sinoa.
Tsy ireo fikambanana rehetra tafiditra tamin'io hetsika io no nanamafy an'ireo fitsipika voafaritra ireo. Samy niala tamin'ilay izy avokoa ny Amnesty International sy ny Reporters sans frontières. Milaza ny RSF (Reporters sans Frontières) fa “dingana iray mankany amin'ny làlana marina” ilay hetsika, saingy tsy ampy ireo fomba hampiharana azy amin'ireo mpandraharaha. Hita ato amin’ity rohy ity ireo ahiahiny voalohany. Tsy nanazava ny heviny ny sampana britanika Amnesty saingy asehony ao anaty pejiny Aterineto famoretana ny lahatsary iray an'i mpiara-nanorina ny Global Voices Ethan Zuckerman, izay amelabelarany ny mikasika ny sivana anaty tambajotra.
Any ifotony, sahala amin'ny toa manana fahatsapàna ireo fikambanana sasantsasany fa afaka miaro ny zon'ireo mpanao aterineto kokoa izy ireo raha toa tsy milefitra amin'ny fotokeviny. Mifanohitra amin'izay, ireo hafa mino fa ny fandraisan'izy ireo anjara sy ny fananganany fifanakalozankevitra iray izay afaka hipaka amina fanovàna miandàlana no tena zava-dehibe.